Forests Nov 22, 2016
According to the EUTR, companies should consider whether there isahigh risk that illegal timber can enter their supply chains by assessing the prevalence of illegal logging inasource country, the accessibility of official information, and/or the presence of armed conflict which frequently is associated with natural resources, including timber. European Commission (EC) Guidance published earlier this year also directs companies and enforcement officials to consider national levels of corruption. When sourcing from countries with significant illegal logging and evidence of corruption, importers must take measures to reduce the risk of illegality in their particular supply chains toanegligible level. Letters obtained from the Swedish regulator and translated by Forest Trends assert that wood from Myanmar is high risk due to levels of corruption and administrative problems in the country, armed conflicts in many regions where wood is harvested, and evidence of illegal harvesting.
Jade Saunders | 2016年11月 22日
「我が国の全ての輸出木材製品が我が国の法律に適合していることを我が国の輸出業者がお客様に明確に示すことができるようシステムを改善することを私たちは確約する。そのためにこそ、ミャンマー木材合法性証明システムを開発し、FAOとEUの支援を受けながら、我が国の木材製品が我が国の法律に完全に適合して生産されていることを示すために何が必要なのか、現在のシステムとの間にどのようなギャップがあるかについて分析している。 2016-17年度は、全面的な伐採一時停止を宣言した。伐採が再開する時には、このギャップ分析で明らかになった問題に完全に対処する行動を取るつもりである。 また、伐採が再開された後の伐採量は現在の合法的な伐採量の半分以下に抑える予定である。それはシステムに必要な改善を施すことを容易にするだろう。
မြန်မာ့သစ်ထုတ်ကုန်ထောက်ခံချက်သည် အီးယူကုန်တင်ပို့သူများအတွက် သင့်တော် လုံလောက်မှုမရှိ ကြောင်း ဆွီဒင်တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း
Jade Saunders | နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်(MFPMF)မှထုတ်ပေးသော ထောက်ခံ ချက်ဖြင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံအတွင်းသို့တင်ပို့ခဲ့သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများသည် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သင့်တော်လုံလောက်သောသက်သေမဖြစ်ဟု ဆွီဒင်စီမံခန့်ခွဲမှုတရား ရုံးမှ ယခင်အပတ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။် အီးယူသစ်တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ (EUTR) ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် ဆွီဒင်အာဏာပိုင်များ၏တားမြစ်မိန့်များနှင့် စင်ကာပူပို့ကုန်လုပ်ငန်း တစ်ခုမှတဆင့် သစ်တင်သွင်းခဲ့သောကုမ္ပဏီ၏ အယူခံဝင်မှုကို တရားရုံးသည် တနှစ်တာခန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမှုရင်ဆိုင်နေခဲ့သော Almtra Nordic ကုမ္ပဏီသည် ဆွီဒင်ကော်နာငွေ ၁၇၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၀၀) ဒဏ်တပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ လက်ရှိအခြေအနေများအရ ၄င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော သစ်များတင်သွင်းခြင်းမပြုတော့ကြောင်းကို ဆွီဒင်၏ EUTRတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းထံသို့လည်း အသိ ပေးစာ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်သည်။
ယခုဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အီးယူနိုင်ငံများအတွင်းသို့ သစ်တင်သွင်းမှုသည် တရားမဝင် ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏မည်သည့် ဒေသတွင် မည်သူက ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းကို အတိအကျဖော်ပြနိုင်ရန်နှင့်၊ ဆောင်ရွက်အပ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်(risk assessment) နှင့် လျှော့ပါးသက်သာစေသောအစီအမံများ (mitigation measures) ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ထားကြောင်းပြသနိုင်သည့် တိကျခိုင်မာသောစနစ် တည်ထောင်ရန်သာလိုအပ်ကြောင်း သတိမူဖို့လိုပါသည်။ တရားရုံးသည် MFPMF၏ ပုံမှန်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကသင့်တော်လုံလောက်စွာ သက်သေမပြနိုင်ခဲ့ခြင်းပေါ်တွင် အခြေခံကာ ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် တရားဝင်ထုံးတမ်းအစဉ်အလာမဟုတ်သော်လည်း ဆွီဒင်နိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြားတရားရုံးများသာမက အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးကပါ ကုမ္ပဏီများ တရားမဝင်သစ်ဝယ်ယူ ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော စနစ်ရှိမရှိ ချင့်ချိန်သောအခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားကြဖွယ်ရှိပါသည်။
ယခုအမှုသည် MFPMF မှထုတ်ပေးသောအာမခံချက်သည် ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိကြောင်း တရားရုံး တစ်ခုမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောပထမဦးဆုံးအမှုဖြစ်သည်။ များမကြာမီအနာဂတ်တွင် အခြားဥရောပ နိုင်ငံများမှ မြန်မာ့သစ်နှင့် ဆက်စပ်သောအမှုကိစ္စများလည်း အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိရာ ကုမ္ပဏီများနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ယခုအမှုအား သတိထားလေ့လာနေကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်တောထွက်ကုန်ဝယ်သူအများစုသည် ၄င်းတို့၏ဝယ်ယူမှုများ မြန်မာ့သစ်တော ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြနိုင်ရန် “Green Folder”ဟုအသိများသော အထောက်အထားများကို အသုံးပြု လေ့ရှိပါသည်။ MFPMF မှစုစည်းပေးသော ထိုအထောက်အထားများတွင် မြန်မာ့သစ်လုံးများ ရောင်းချခွင့်ရှိသော တစ်ခုတည်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(MTE)မှ ထုတ်ပေးခဲ့သော လုပ်ကိုင်ခွင့်များနှင့် အတူ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြားစာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ထိုအထောက်အထားများသည် တရားမဝင်သစ်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်အား မျက်ကွယ်ပြုနိုင်လောက်သည့်သက်သေအဖြစ် ပြည့်စုံမှုမရှိဟု ဆွီဒင်တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် MTE၏ အထောက်အထားများသည် ထုတ်ကုန်များ တရားဝင်မဝင်ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သော သစ်လုံးများ၏မူလထွက်ရှိရာဒေသ၊ ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့်သစ်ထုတ်ကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာ့သစ်ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီမှု စသည့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကို တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ဆွီဒင်EUTRအာဏာပိုင်များ၏အစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်များက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခိုင်မာစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အထားများတွင် သစ်လုံးများထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် သစ်တောဧရိယာများကို ဖော်ပြထားသော်လည်း၊ သစ်တင်ပို့မှုနှင့် သစ်ခုတ်ယူခဲ့သောတောများ အကြားရှိ သစ်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်(timber supply chain)ကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သစ်ခုတ်ယူသည့်အချိန်မှ စတင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုကွင်းဆက်ကို ဖော်ပြနိုင်မှုမရှိခြင်းသည် တရားမဝင်သစ်များကို တရားဝင် သစ်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်အတွင်းသို့ လျှို့ဝှက်ထည့်သွင်းနိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေးပါသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် မူရင်းနိုင်ငံ၏တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းပျံ့နှံ့နေမှုအခြေအနေ၊ တရားဝင်သတင်း အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှုနှင့် သစ်အပါအဝင်သဘာဝအရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အခြေခံတတ်သည့် လက်နက်ကိုင်သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိမရှိ စသည်တို့အား စီစစ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့၏သစ်ဝယ်ယူ မှုကွင်းဆက်အတွင်းသို့ တရားမဝင်သစ်များပါလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကြီးမကြီးအား ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း EUTRမှဆိုသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဥရောပကော်မရှင်(EC)၏လမ်းညွှန်မှု မှလည်း ကုမ္ပဏီများနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အစိုးရအဆင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ညွန်ကြားထားခဲ့ပါသည်။ တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ကြောင်း ထင်ရှားကာ၊ လာဘ်စားမှုအထောက်အထားများရှိသည့် နိုင်ငံများမှ သစ်တင်သွင်းသောအခါတွင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏သစ်တင်သွင်းမှုကွင်းဆက်အတွင်း တရားမဝင်သစ် ပါဝင် နိုင်မှုအန္တရာယ်ကို မျက်ကွယ်ပြုနိုင်သောအဆင့်အထိ လျော့ချနိုင်သည့်စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက် ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆိုထားပါသည်။ဆွီဒင်တာဝန်ရှိသူထံမှရရှိကာ Forest Trendsမှ ဘာသာပြန်ဆိုထား သည့် စာရွက်စာတမ်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိလာဘ်စားမှုအခြေအနေဆိုင်ရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ သစ်ခုတ်ယူသည့်ဒေသအများအပြားရှိ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများနှင့် တရားမဝင်သစ် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာသက်သေများကြောင့် မြန်မာ့သစ်များသည် တရားမဝင် ဖြစ်နိုင်ခြေကြီးကြောင်း အခိုင်အမာဖော်ပြထားသည်။
တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်မှုတွင်အထူးဖော်ပြထားသောလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ပြဿနာညှိနှိုင်းရေးနည်းဗျူဟာများတွင် မြေအသုံးပြုမှုကို တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှစစ်ဆေးခြင်း၊ တသီးတခြား စာရင်းစစ်မှုများနှင့် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအမှတ်အသား သို့မဟုတ် သစ်များအား မည့်သည့်ဒေသမှ ခုတ်ယူခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော stable isotope များစသည့် သစ်မူလအရင်းအမြစ်အား ရှာယူနိုင်သည့် သင့်တော်မှန်ကန်သော သိပ္ပံနည်းစနစ်များပါဝင်သည်။
ဤတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်တိုက်တွန်းမှုများသည် အီးယူနိုင်ငံများတွင်သာ သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း ထင်ရှားသော်လည်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမှလည်း Lacey ဥပဒေအောက်ရှိ အထူးကြိုတင်သတိထားသင့် သောအချက်များကု အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်တင်သွင်းမှုပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါသည်။
သြဂုတ်လတွင် မြန်မာအစိုးရသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အလွန်အကျွံသစ်ခုတ်ယူမှုကြောင့် သစ်တောများ ပြုန်းတီးမှုအား အသိအမှတ်ပြုကာ သစ်ထုတ်လုပ်မှုကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပိတ်ပင်တားမြစ် ခဲ့ပါသည်။ဤကဲ့သို့ တားမြစ်ခဲ့သောကြောင့် မြန်မာ့သစ်တောများ သက်သာရာရခဲ့ပါသည်။သို့သော် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ထိုတားမြစ်ချက်သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိသစ်တောအများစုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေသော်လည်း ၂၀၁၇ခုနှစ်မတ်လတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် ယာယီတားမြစ်ချက်သာဖြစ်နေပါ သည်။တခြားနိုင်ငံများမှ အတွေ့အကြုံများကို ကြည့်ပါက ယခုကဲ့သို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ သာ သစ်ခုတ်ယူမှုတားမြစ်ခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကို မဖြစ်ပေါ်နိုင်စေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် သစ်တောကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ခိုင်မာသောမူဝါဒများ ချမှတ်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သစ်တောပြန်လည်ပြုစုရေးမူဝါဒအား အရှိန်မြှင့်တင်ရန် Forest Trends မှ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သစ်တောများအား ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဌာနများက တိကျသေချာမှုရှိသည့်ဥပဒေနှင့်ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်နိုင်သော သစ်တောစီမံ ခန့်ခွဲမှု စနစ်အား ကျင့်သုံးနိုင်မှသာ သစ်ခုတ်ယူခြင်းများကို ပြန်လည်စတင်သင့်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများမရှိပါက လက်ရှိတားမြစ်ချက်သည် မြန်မာ့သစ်တောဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဆိုင်းငံ့ရုံ သာ တတ်နိုင်ပြီး ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။
တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ရေးသားဖော်ပြချက်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာ့သစ်တောဦးစီးဌာနမှ Forest Trends သို့ ထုတ်ပြန်ချက်တရပ် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ထိုထုတ်ပြန်ချက်တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံမှ သစ်ဝယ်ယူလိုသောတာဝန်သိကုမ္ပဏီများ ကြုံတွေ့ရသည့်ပြဿနာများကို အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ သစ်တောကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သစ်ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ရှင်းလင်းမှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
“မိမိတို့၏ လက်ရှိထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များသည် မိမိတို့၏ သစ်ပို့ကုန်များကို မူရင်းထုတ်လုပ်ရာ သစ်တောများအထိ နောက်ကြောင်းပြန်ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပြီး၊ ၄င်းသစ်များတရားဝင် ထုတ်လုပ် ထားသည်ကို ဖော်ပြနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော် မူရင်းသစ်ထုတ်ရာဒေသ များပြားခြင်း၊ သစ်ခွဲလုပ်ငန်းများ၌ ခွဲခြမ်းစီစစ်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ကွင်းဆက်အား ပြသနိုင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများသည် အမြဲရရှိနိုင်ခြင်း မရှိပါ။”
“မိမိတို့၏သစ်တင်ပို့သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို မြန်မာ့သစ်ပို့ကုန်အားလုံး တရားဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန်အတွက် မိမိတို့၏စနစ် ကောင်း မွန်တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ထို့ကြောင့် တရားဝင်သစ် စီစစ် ဆောင်ရွက်ရေးစနစ်(Myanmar Timber Legality Assurance System) အား တည်ထောင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိတွင် ဤစနစ်နှင့် မိမိတို့၏သစ်ထုတ်ကုန်များ တရားဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်လုပ် ထားကြောင်းဖော်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ချက်ကြားကွာဟမှုများကို FAO နှင့် အီးယူတို့၏ အကူအညီ ဖြင့် လေ့လာသုတေသနပြုလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၆–၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း သစ်ထုတ်လုပ်မှုအားလုံး ရပ်နားထားရန် တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကာ သစ်ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်စတင်သောအခါတွင်လည်း သုတေသနပြုမှုမှ တွေ့ရှိရသောကွာဟမှုများကို အပြည့်အဝ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် သစ်ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်စတင်သောအခါ သစ်ခုတ်ယူနိုင်သည့်ပမာဏသည် လက်ရှိ၏ ၅၀%အောက်တွင်သာ ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့လျော့ချခြင်းသည် မိမိတို့စနစ်အတွက် လိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိထားသော တရားမဝင်သစ်များ သည် ယခုအခါ ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်သာ အသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။
မိမိတို့၏ တရားဝင်သစ် စီစစ်ဆောင်ရွက်ရေးစနစ်(Myanmar Timber Legality Assurance System)အား ခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း အီးယူနှင့်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်း(FLEGT)ဆိုင်ရာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်အား အကောင် အထည်ဖော်သည့် ပထမခြေလှမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။”